घर मा क्रिसमस - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-01 > घरमा क्रिसमस
प्रायः सबैजना क्रिसमसको लागि घरमा हुन चाहन्छन्। तपाईं सायद घरमा पनि छुट्टीको बारेमा कम्तिमा दुई गीतहरू सम्झन सक्नुहुन्छ। अहिले म आफैंमा यस्तो गीत गुनरहेछु।
कुन कुराले दुई सर्तहरू, घर र क्रिसमस, लगभग अविभाज्य बनाउँछ? दुबै शब्दहरूले न्यानोपन, सुरक्षा, सान्त्वना, राम्रो खाना र प्रेमको भावना जगाउँदछ। साथै सुगन्ध, जस्तै बिस्कुट बेकिंग (बिस्कुट बेकिंग), ओभन मा रोस्ट, मैनबत्ती र फर शाखाहरु। यस्तो देखिन्छ कि एक बिना अर्को गर्न सकिदैन। क्रिसमस को लागी घर बाट टाढा हुनु धेरै मानिसहरुलाई दुखी र एकै समयमा उदासीन बनाउँछ।
हाम्रो चाहना, चाहना र आवश्यकताहरू छन् जुन कुनै मानिसले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन। तर यति धेरै मानिसहरू परमेश्वरतर्फ फर्कनु अघि अर्कै ठाउँमा पूर्ति खोज्छन् - यदि उनीहरूले केहि गर्छन् भने। एउटा घरको चाहना र हामीसँग राम्रा चीजहरू राख्नु वास्तवमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको चाहना हो। मानव हृदयमा निश्चित शून्यता छ जुन भगवानले मात्र भर्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्मस वर्षको समय हो जब मानिसहरू यसको लागि अधिक चाहना गर्दछन्।
क्रिसमस र घरमा एकसाथ मिलेर जानुहुन्छ किनकि क्रिसमसले पृथ्वीमा परमेश्वरको आगमनको प्रतीक दिन्छ। उहाँ यस पृथ्वीमा हामीमध्ये एक हुन आउनुभयो ताकि हामी उहाँलाई आफ्नो घर बाँड्न सकौं। भगवान घरमा हुनुहुन्छ - उहाँ न्यानो हृदयको, मायालु छ, पोषण र हामीलाई सुरक्षा, र त्यो पनि राम्रो गन्ध छ, ताजा वर्षा वा एक सुखद गन्ध गुलाब जस्तै। घरको बारेमा सबै राम्रा भावनाहरू र राम्रा चीजहरू परमेश्वरसँग नजिकको सम्बन्धित छ। ऊ घर छ।
उहाँ हामी भित्र आफ्नो घर बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ हरेक विश्वासीको हृदयमा बस्नु हुन्छ, त्यसैले उहाँ हामी भित्रको घरमा हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो कि उहाँ हाम्रो लागि एउटा ठाउँ, एउटा घर तयार गर्न जानुहुन्छ। "येशूले जवाफ दिनुभयो र उसलाई भन्नुभयो, "मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन पालन गर्नेछ। र मेरो बुबाले उहाँलाई माया गर्नुहुनेछ, र हामी उहाँकहाँ आउनेछौं र उहाँसँग बस्नेछौं (यूहन्ना १४:२३)।
हामी पनि उसैमा घर बनाउँछौं । "त्यस दिनमा तिमीले जान्नेछौ कि म मेरो बुबामा छु र तिमी ममा र म तिमीमा" (यूहन्ना १४:२०)।
तर घरका विचारहरूले हामीमा न्यानो र सान्त्वना पाउँदैन भने नि? कसैसँग आफ्नो घरको खुशीको सम्झना हुँदैन। परिवारका सदस्यहरूले हामीलाई निराश बनाउन सक्छन् वा तिनीहरू बिरामी पर्न सक्छन् र मर्नेछन्। त्यसोभए परमेश्वर र घरमा हुनुहुँदा उहाँसँग झनै समान हुनै पर्छ। जसरी उहाँ हाम्रो लागि आमा, बुबा, बहिनी वा भाई हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो घर पनि हुन सक्नुहुनेछ। येशू हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, पोषण दिनुहुन्छ र सान्त्वना दिनुहुन्छ। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयको सबै तृष्णा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको घर वा अपार्टमेन्टमा यो छुट्टीको मौसम मनाउनुको सट्टा, भगवानको घर आउन केहि समय लिनुहोस्। तपाईंको चाहना र ईश्वरको आवश्यकतामा तपाईंको वास्तविक चाहनालाई स्वीकार्नुहोस्। घर र क्रिसमसबाट सबै भन्दा राम्रो उहाँसँग, उहाँसँग र उहाँ मार्फत हुनुहुन्छ। क्रिसमसको लागि उसमा एउटा घर बनाउनुहोस् र उहाँसँग घर आउनुहोस्।